Miswe 3.6: Kuzivikanwa Kusazivikanwa Kugovaniswa Kwakaburitswa Nekunatsiridza | Linux Vakapindwa muropa
Iyo Tail Project yakazivisa kuti yatanga iyo itsva vhezheni TAILS 3.6, iyo Linux-based inoshanda sisitimu iyo inotambura ne "amnesia" nekuda kwedata redu repachivande. Ehe, iyo inoshanda sisitimu yekuzivisa isingazivikanwe ine nyowani nyowani, iyo imwecheteyo system yavanoti Edward Snowden, aimbove mumiriri weCIA, aigara achishambadzira pamhepo asingazivikanwe uye achichengetedza zvakavanzika. Zvakanaka izvozvi newewo unogona kunakidzwa neshanduro nyowani yeiyi LiveCD.
Miswe 3.6 ikozvino inozopihwa simba neiyo yazvino kernel, iyo Linux 4.15, pamwe nekuvandudza kwese kunoreva izvi, senge zvigamba zveMeltdown neSpecter zvinozovandudza kuchengetedzwa kwesystem yedu, kudzivirira izvi zvinokuvadzwa kuti zvisashandiswe. Rangarira kuti iyi isisitimu yekushandira yakanangana nekuvanzika uye kusazivikanwa, saka chekuchengetedza chinonyanya kutapirirwa ...
Pamusoro pekuvandudzwa uku, ivo vakagadzirisawo zvimwe zvikwata kubva mushanduro dzakapfuura uye nekuwedzera mapakeji esoftware mu shanduro zhinji dzechinyakare Semazuva ese. Semuenzaniso, yazvino vhezheni inowanikwa kusvika nhasi yeTOR Browser yakawedzerwa pamwe neiyo Tor mutengi / server kuitisa, pamwe neyakagadziridzwa yeElectrum 3.0.6 neMozilla Thunderbird 52.6.0 zvinhu, pamwe nekumwe kushanda uye kugadzirisa. .
Vagadziri vasingazivikanwe vaita basa rakanaka, uye rondedzero yenhau haigume ipapo. Iye zvino isu tine nyowani yekuraira turu yekushandisa inonzi pdf-redact-maturusi ekuchenesa PDF metadata, kuwedzera pakuve nekwanisi yekushandura. Inodaidzwa pdf-redact-zvishandiso. Tichawana zvakare AppArmor inogoneswa chimiro nekumisikidza kweMozilla Thunderbird yekuchengetedzeka kuri nani, uye kumwe kuvandudzwa senge kuisirwa otomatiki kwevatyairi vhidhiyo yekuvandudza GPU rutsigiro, nezvimwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Miswe 3.6: iko kusazivikanwa kugoverwa kwakaburitswa pamwe nekuvandudzwa